Shabelle Media Network – TALOOYIN MADAXWEYNE IYO XULASHADA R/ WAZAARAHA!
TALOOYIN MADAXWEYNE IYO XULASHADA R/ WAZAARAHA!
Malaysia: (Sh.M.Network) Allaah ayaa mahad oo idil iska leh, nabadgalyo iyo naxariisina Nabigeena Muxammad ah korkiisa Allaha yeelo.
Mudane Madaxweynaheena cusubow (Prof. Xassan Sh. Maxamuud) Ummadda Soomaaliyeed waxeey kuu heeysaa taageero aad u balaaran “HADDA!” meel kastaba ha joogtee, waxeey kuusoo wada dhaweeynayaan si aad u qalbi furan, iyagoo og in aad tahay shaqsi aqoon leh, kana tirsanaa hoggaanka bulshada rayidka ah, waliba og in aad tahay hoggaamiye aaneey gacmihiisu ka disqeyn Dhiiggii Ummadda. Doorashadii lagu doorteyna Ummadda Soomaaliyeed waxeey galisey rajo aad u heersareeysa, balse waxeey ka dhursugayaan, nuuca iyo qaabka aad usoo xulandoonto Ra’iisul wasaarahaaga, oo aan marnaba xaqiiqdii sahlaneyn. Balse waxaan jeclaan laheyn in aan inagoo wanaagaada iyo kan ummadeenaba jecel, ku talo siino, oo sidan aad wax yeesho, insha Allaah.